धरहरा निर्माण गर्न तीन अर्ब ४५ करोडमा ठेक्का
शीतलपाटीन्युज डटकम, काठमाडौँ । राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणले भुकम्पबाट भत्किएको धरहरा निर्माण गर्न तीन अर्ब ४५ करोडमा ठेक्का सदर गरेको छ । सबैभन्दा कम रकममा ठेक्का हाल्ने जिआईटिसी कालिका रमन जेभीलाई धरहरमा निर्माणको ठेक्का पाएको हो । प्राधिकरणले आईतवार धरहरा निर्माण लागि परेका प...
शीतलपाटीन्युज डटकम, काठमाडौँ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका कुलपति सुशील कोइरालाले उपकुलपतिमा कांग्रेसकै कार्यकर्ता प्रा.डा. तीर्थ खनियाँलाई नियुक्त गरे । सरकारको यो कदममा तत्कालीन माओवादी र एमालेले पनि समर्थन गरे । किनकि, उनीहरूले पनि रजिस्ट्रार र रेक्टर पाए । स्...
केन्द्रीय बैकको अनुमतिबिना भुक्तानी सेवा दिए १० वर्ष जेल
शीतलपाटीन्युज डटकम, काठमाडौँ । केन्द्रीय बैकको अनुमतिबिना भुक्तानी प्रणाली सञ्चालन गरे १० वर्ष जेल सजाय भोग्नुपर्ने व्यवस्था हुन लागेको छ । केही दिनअघि व्यवस्थापिका–संसदमा दर्ता भएको भुक्तानी तथा फस्यौट विधेयकमा उक्त व्यवस्था छ। कुनै भुक्तानी उपकरणको माध्यमबाट सेवाग...
प्रहरीको श्रव्यदृश्य सामग्री विश्लेषणात्मक र चेतनामुलक हुनुपर्छः प्रवक्ता थापा
शीतलपाटीन्युज डटकम। १७ भदाै, काठमाडाैँ । नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक शैलेश थापा क्षेत्रीले श्रव्यदृश्य सामग्री थप विश्लेषणात्मक, खँदिलो र चेतनामुलक हुनुपर्ने बताएका छन । प्रहरी प्रधान कार्यालय श्रब्य दृश्य शाखामा संचालन हुने तेस्रो समूहको “श्रब्य दृश्य आधारभूत तालिम&...
शीतलपाटीन्युज डटकम, काठमाडौँ । फुलचोकी आधारभूत विद्यालय पनौती काभ्रेलाई जनता बैंक नेपालले दुई थान कम्प्युटर सहयोग गरेको छ । बैंकका संस्थागत मामिला प्रमुख छविलाल हुमागाईँले पनौती नगरपालिकाका प्रमुख भीम न्यौपाने मार्फत् विद्यालयका प्रधानाध्यापक केशव हुमागाईंलाई उक्त सामाग्री हस्तान्तरण गरेका...
आज श्रीकृष्ण जन्माष्टमी, कृष्णबारे रोचक तत्व
शीतलपाटीन्युज डटकम, काठमाडौँ । भाद्र कृष्ण अष्टमीका दिन मनाइने ‘श्रीकृष्णजन्माष्टमी’ आज देशभरी भगवान् श्रीकृष्णको पूजा–आराधना गरी श्रद्धा–भक्तिपूर्वक मनाइँदैछ । ज्ञानयोग, कर्मयोग र भक्तियोगका प्रणेता भगवान् श्रीकृष्णको जन्म द्वापरयुगमा भाद्रकृष्ण अष्टमी अर्थात् आ...
शीतलपाटीन्युज डटकम, पोखरा । आजबाट महेन्द्रपुल स्थित पोखरा मोबाइल टावरमा मोबाइल एक्स्पो (मेला) सुरु हुने भएको छ । केही महिनादेखि अनौपचारिक सेवा दिइरहेको टावरलाई आजबाट भने औपचारिक शुभारम्भ गर्दै ‘मोबाइल एस्पो’ आयोजना गर्न लागेको शुक्रबार आयोजित पत्रकार सम्...
मन्त्रीलाई कालो झन्डा
शीतलपाटीन्युज डटकम, काठमाडौँ । संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष एवं उपप्रधानमन्त्री उपेन्द्र यादव उपस्थित कार्यक्रममा कालो झन्डा देखाउँदै होहल्ला गरेको अभियोगमा पक्राउ परी ७ भदौदेखि प्रहरी हिरासतमा राखिएका युवा राममनोहर यादवको मृत्यु भएको छ । बिहीबार बर्दिया जिल्ला प्रहरी कार्यालयको हिरासत...
शीतलपाटीन्युज डटकम, काठमाडौँ । रक्षा मन्त्रालयले एक वर्षभित्रै सञ्चालनमा ल्याउने गरी नेशनल डिफेन्स कलेज (वार कलेज) खोल्ने तयारी थालेको छ। राष्ट्रिय क्षेत्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा/प्रतिरक्षा सम्बन्धी अध्ययन/अध्यापान तथा रणनीति सम्बन्धी प्राज्ञिक केन्द्रका रुपमा नेशनल डिफेन्स क...
शीतलपाटीन्युज डटकम, काठमाडौँ । एक साताभित्रै प्रदेश ५ मा आधा दर्जन बलात्कारका घटना सार्वजनिक भएका छन् । तीमध्ये तीन जना बालिका छन् । मंगलबार बाँकेको कोहलपुरमा पाँच वर्षीया बालिकामाथि काकाले बलात्कार गरेको मुद्दा प्रहरीकहाँ पुगेको खबर नसेलाउँदै शुक्रबार १३ वर्षीया बालिका आफ्नै हजुरबुवाबाट...
यतिको विमान धावनमार्गमा दुर्घटना : विमानस्थल अवरुद्ध, सबै यात्रु भने सकुशल
शीतलपाटीन्युज डटकम। काठमाण्डौ। यति एयरलाइन्सको जेट स्ट्रीम विमान धावनमार्गमा चिप्लिएको छ । शनिबार राति काठमाडौं अवतरणको क्रममा नेपालगन्जबाट आएको विमान चिप्लिएको हो । २१ जना यात्रु लिएर आएको विमानका सबै यात्रु सकुशल रहेको बताइएको छ । अवतरण गर्ने क्रममा रन वेबाट चिप्लिएर विमान बाहिर गएको थियो । विम...
७५३ सबै स्थानीय तहमा नेपाल प्रहरीको इकाई स्थापना
शीतलपाटीन्युज डटकम । १६ भदौ, काठमाडौँ । नेपाल प्रहरीको सङ्गठन गरिएको छ ।गत २०७५ जेठ २७ को सरकारी निर्देशनबमोजिम प्रहरी कार्यालय नभएका बाँकी ३० स्थानीय तहमा प्रहरी कार्यालय स्थापना गरिएको हो । यसअघि चार नगरपालिका र २६ गाउँपालिका बाहेक ७२३ स्थानीय तहमा मात्र प्रहरी कार्यालय रहेकामा अहिले सबै स्थ...
छोरीचाहिँ चाहिने नै रहेछ : ड्रग्समा परेका परिवारका लागी
शीतलपाटीन्युज डटकम। – वसन्तराज कुँवर म नार्कोनन्मा काम गर्दछु र संसारभरबाट ड्रग्समा परेका परिवार मकहाँ पनि दुःख लिएर आउँछन् । ड्रग्समा परेका छोरा–छोरीले आफ्ना आमा–बाबु र आफुलाई माया गर्नेहरूलाई चरम पीडा दिने गर्दछन् । अझ त्यसमा पनि यदि छोरा ड्रग्स एडिक्ट भएमा त्यो पीडा परिवारका ल...
नेपाली ब्रान्ड विदेशमा चम्किँदै
शीतलपाटीन्युज डटकम, काठमाडौँ । नेपालमा अधिकांश वस्तु विदेशबाट आयात हुन्छ । तर, कतिपय यस्ता नेपाली उत्पादन पनि छन् जसले विदेशमा पनि राम्रो पहिचान बनाएका छन् । आजको नयाँ पत्रित्रकामा समाचार छ । वाइवाइ चाउचाउ नेपालीको मात्र होइन, तीन दर्जन मुलुकका भान्सामा पाक्छ । गोल्डस्टार नेपालम...
बाहिरी चक्रपथः 'ल्यान्ड पुलिङ' मापदण्ड विपरीत कित्ताकाट
शीतलपाटीन्युज डटकम, काठमाडौँ । सहरी विकास मन्त्रालयले बाहिरी चक्रपथ आयोजनामा तोकिएको सडकसीमाभित्र 'ल्यान्ड पुलिङ' मापदण्डविपरीत जग्गा कित्ताकाट गरिएको भन्दै उपत्यका विकास प्राधिकरणका प्रमुख आयुक्त भाइकाजी तिवारीसँग स्पष्टीकरण मागेको छ । कान्तिपुरको पृष्ठ ५ मा छ...
प्रधानमन्त्री ओली र मोदीले गरे पशुपतिनाथको धर्मशाला उद्घाटन
शीतलपाटीन्युज डटकम, काठमाडौँ । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पशुपतिनाथ क्षेत्रमा निर्माण भएको धर्मशाला उद्घाटन गरेका छन् । पशुपति क्षेत्रमा निर्माण भएको नेपाल भारत मैत्री धर्मशालाको उद्घाटन गरेका हुन् । धर्मशाला उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले...
दुधालु गोरु ! जहाँ गाउँलेलाई 'दुधको प्रसाद' बाँड्छन्...
शीतलपाटीन्युज डटकम, सिन्धुलीपाल्चोक । भनाई नै छ — गोरु ब्याउँदैने, दुध पनि दिँदैन । तर, यति बेला हेलम्बु गाउँपालिकाको इचोक, पुरानागाउँका सोनाम तामाङको घर पुग्ने जोकसैलाई यो भनाई झुटो लाग्न सक्छ । तामाङ दिनहुँ गोरु दुहुन्छन्, त्यसको दुध गाउँलेलाइ प्रसाद बाँड्छन् ।&...
उठ्न छाड्यो काठमाडौंको फोहोर, भित्री गल्लीमा फोहोरको डंगुर
शीतलपाटीन्युज डटकम, काठमाडौँ । बिमस्टेक सम्मेलनलाई लक्षित गरी काठमाडौंका मुख्य सडक सिँगारिएका छन् । तर, भित्री गल्ली र चोकहरूमा भने केही दिनदेखि फेरि फोहोरको डंगुर लाग्न थालेको छ । पछिल्लो समय परेको वर्षाका कारण सिसडोलमा फोहोर खन्याउन समस्या भएको छ । फोहोर उठाएर गएका ट्रक हिलाम्मे ब...